Dia an-tongotra namaky ny Quarter Latina, any Paris | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Paris, Inona no ho hita
Iray amin'ireo zoro mahafinaritra indrindra an'ny Paris is the Latin Quarter, eo amin'ny morony ankavanan'ny Seine, amin'ny fahadimy nandohalika avy amin'ny renivohitra frantsay. Ao amin'ny Quarter Latina i La Sorbonne, ohatra, anisan'ireo andrim-pampianarana hafa, tranonkala manan-tantara sy kolontsaina.
Kafe, trano fisakafoanana, mpizaha tany, mpianatra, zaridaina, tranombakoka, fivarotana, malaza be ity distrika ity a fitsangatsanganana any Paris Tsy feno izany raha tsy mandeha mamaky ny Quarter Latina.
1 Ny telovolana latina
2 Inona no ho hita ao amin'ny Quarter Latina
Ny telovolana latina
Avy aiza io anarana io? Avy amin'ny Moyen Âge, rehefa nonina ny manodidina ny mpianatra Sorbonne ary Nampiasa latinina ho fiteny fianarana izy ireo. Zavatra izay manohy ny raharaha mandraka androany, satria feno mpianatra ny tranonkala. Tamin'ny taonjato faha-68 sy faha-XNUMX ireo mpianatra ireo ihany dia nandamina ny hetsika politika manan-danja indrindra tamin'izany fotoana izany, ohatra, ny Mey malaza 'XNUMX.
Noho izany, ny zavatra tsara indrindra alohan'ny hanombohana mandehandeha eto dia ny mamaky kely momba ny tantaran'ny Quarter Latina. Manararaotra, mahatakatra ary manana endrika hafa. Ny varavarana fidirana dia matetika ny Place de Saint Michel, miaraka amin'ny loharanony miaraka amin'ilay dragona. Mihoatra ny labyrintan'ny arabe misokatra izay misy trano fisakafoanana sy kafe, ny sasany misy terraces, na dia ny lalana lehibe sy malaza indrindra aza dia ny Rue Huchette.
Inona no ho hita ao amin'ny Quarter Latina
El Cluny Museum Tranombakoka kely misy harena sarobidy tamin'ny Moyen Âge. Miasa ao amin'ny trano fonenan'ny abbots an'i Cluny izy io ary eto dia ho hitanao ny lamba misimisy enina manerantany fantatra amin'ny anarana hoe The Lady and the Unicorn. Miloko, vita tanana, miaraka amin'ny taonjato dimy mahery.
Ho fanampin'ireto harena ireto dia manana zaridaina tsara hodiavina mandritra ny fotoana fohy ilay toerana. Mazava ho azy, amin'izao fotoana izao dia mikatona izy io. Eo am-panavaozana azy io ary tamin'ny 29 septambra dia nakatony hatramin'ny 2022. Tranonkala iray hafa mahaliana sy malaza koa ny Fivarotam-boky The Shakespeare and Company, izay nisokatra ny fivarotana voalohany tany Paris tamin'ny 1919.
Ny trano dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny taonjato fahafito ambin'ny folo, raha monastera izy io, fa ny fivarotam-boky dia tamin'ny 50. Ny tranombarotra dia mahaliana amin'ny fanaka, piano, milina fanoratana ary maro hafa. Raha mividy boky ianao, dia hasiana tombo-kase amin'ny sary famantarana ny fivarotam-boky, ary raha te hijanona eo akaiky ianao dia afaka misotro kafe ao amin'ny cafeteria eo akaikinao, mijery ny Seine.
Ny pantheon Izy io koa dia ao amin'ny Quarter Latina. Fiangonana taloha manana dome goavambe izy io saingy ankehitriny dia laika sy manome voninahitra an'ireo maherifon'i Frantsa. Ireto no nalevina Voltaire, Victor Hugo, ny mpivady Curie ary Antoine de Saint-Exupery ary Louis Braille. Ny trano dia nasaina namboarin'i Louis XV ho fiangonana rehefa sitrana tamin'ny aretina ary noho izany dia vita tamin'ny 1791 tamin'ny rivotra Gothic sy klasika iray io.
Goavana sy misokatra ny dome ary eo ambaniny no misy ilay malaza Foucault pendulo (Namaky ilay boky tsy mitovy anarana nataon'i Umberto Eco ve ianao?). Ny pendulo dia andrana nataon'i Foucault mba hampisehoana fa mihodina ny tany.
Etsy an-danin'izany, eo an-tsisin'ny Latin Quarter no misy ny Saha zaridaina, indrindra ny olona amin'ny faran'ny herinandro. Betsaka ny hazo, lalana, olona miresaka na manao hetsika ara-batana. Manodidina ny dobo afovoany dia misy seza hipetrahana, zavatra mahazatra be koa.
Ny fon'ny zaridaina dia ny lapan'ny mpanjaka. Ny zaridaina daty nanomboka tamin'ny 1612 ary ny ampahany dia namboarin'ny Princess Marie de Medici, avy eo Queen of France. Miasa amin'ny lapan'ny Antenimieran-dReny frantsay ny lapa ankehitriny Manafina sary sokitra maherin'ny 100 ireo zaridaina ary a replika kely kokoa an'ny sarivongan'ny fahalalahana malaza izay natolotr'i Frantsa an'i Etazonia. Eo ihany koa ny Loharano Medici mahafinaritra sy milamina.
Zaridaina tsara tarehy iray hafa dia ny Saha zaridaina, zaridaina botanika misy zavamaniry mihoatra ny 4500: zaridaina raozy, zaridaina alpine ary zaridaina ririnina Art Deco. Misy ihany koa ny akanin-jaza lehibe telo nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, fananganana vy sy fitaratra kanto. Maimaimpoana ny fidirana, fa raha te hahalala ny Zoo ary ny Museum momba ny tantara voajanaharymila mandoa saram-pidirana aho. Ao amin'ny tranombakoka farany dia misy galerie natokana ho an'ny mineraly, iray hafa ho an'ny fivoarana ary iray ho an'ny paleontolojia.
Tranombakoka iray hafa mahaliana dia ny Museum an'i Curie. Izy io dia miasa amin'ny toerana niasany sy nianarana radioactivity sy tselatra. I Marie Curie, mendrika hotadidina hatrany, no vehivavy voalohany nahazo ny loka Nobel ary lasa mpampianatra tany Sorbonne. Ireto misy zavamaneno taloha sy zaridaina kely tsara tarehy. Misokatra ny alarobia ka hatramin'ny asabotsy manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 hariva ny tranokala.
Amin'ny tenim-pirenena hafa Fiangonana Latin Quarter misy efatra izay manjaka amin'ny tontolo: Saint-Etienne, saint-Severin, Saint Julien le Pauvre ary Saint Mèdard. Tena tsara tarehy daholo.
Rehefa avy nandeha an-tongotra na nandritra na tamin'ny fiafarany dia nisarika anay foana ireo kafe sy trano fisakafoanana frantsay haka aina sy hisakafoanana ary hisotro zavatra. Ao amin'ny Kianja Sorbonne misy Les patios, trano fisakafoanana kanto. Manaraka izany dia Tabac De La Sorbonne, tsara ho an'ny sakafo maraina matsiro Croissants.
Mazava ho azy, misy tranonkala maro hafa ary heveriko fa anjaranao ny mahita ireo tianao indrindra. Betsaka ary tsara kokoa ny mamela ny tenanao handeha, hirenireny ary mijanona amin'izay mahasarika ny sainao.
Ny Latin Quarter dia manana arabe mahafinaritra, kianja kely, tranobe manan-tantara, sarivongana misy takelaka mety hahaliana anao hamaky, fivarotana isan-karazany. Sarin'ny Fiambenana Conciergerie Tsy azoko ihany koa izany. Nanomboka tamin'ny taona 1370 no niasa izy ary injeniera lehibe. Na mandeha an-tongotra ao anatiny Sainte-Chapel. Taona maro lasa izay, raha nandeha aho, dia tamin'ny famerenana amin'ny laoniny ary mbola hatsarana izany. Ny fitaratra misy fitaratra miloko dia tsara tarehy ary ny antsipirihany…. Andriamanitra ô!
Raha manofa trano sy lakozia ianao, dia mandeha tsara angamba raha hanaraka ny dian'i Julia Child, vadin'ny diplaomaty amerikana iray izay nanoratra boky fandrahoana tamin'ny taona 50. Julie sy Julimankany Niantsena tao amin'ny Tsenan'ny Rue Mouffetard. Misokatra ny trano fivarotana amin'ny 9 maraina, manakaiky ny mitataovovonana ary hisokatra ny tolakandro.
Raha mahaliana anao Kolontsaina Silamo, satria any Paris dia misy koa izy io ary eo amin'ny manodidina azy no asolo tena azy ao amin'ny Moske lehibe any Paris, ny lehibe indrindra ao an-tanàna, naorina tamin'ny 1926.
Mazava ho azy fa tsara tarehy ny zaridainany ary manana trano fisakafoanana sy trano fisotroana fatratra izy. Miaraka amin'ireo andalana ireo ihany ny Ivon-toerana Iraisam-pirenena Arabo, izay mandinika ny fandraisana anjaran'ny siantifika sy kolontsaina arabo. Ny trano dia rafitra ankehitriny izay noforonin'i Jean Nouvel tamin'ny faran'ny taona 80 tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Mihidy sy mivoha arakaraka ny tara-masoandro ny fisokafany.
Araka ny hitanao, ny Quarter Latina any Paris dia misy zavatra kely rehetra ary tsy handiso fanantenana anao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Paris » Dia an-tongotra namaky ny Quarter Latina, tany Paris
Faedo avy any Ciñera